प्रकासित मिति : २०७६ मंसिर १८, बुधबार १८:१३ प्रकासित समय : १८:१३
कुनै देशलाई सिध्याउनु प¥यो भने त्यहाँको शिक्षा पद्धतिमा विष घोलिदिए पर्याप्त हुन्छ । यसो भएमा जनता झुक्याउने नेता, न्याय लिलाममा राख्ने न्यायाधीश, किड्नी खोतल्ने डाक्टर, धर्म सौदा गर्ने पुजारी, गुरुलाई खुँडाले सत्कार गर्ने शिष्य, बाउआमालाई बृद्धाश्रमको पाहुना बनाउने छोराछोरी पाइला पाइलामा भेटिन्छन् । जिन्दगीका धेरै आयाम पुस्तकमा नभएर माटो र बाटोमा भेटिन्छ । पुस्तक कम र ज्ञान धेरै बटुल्दा सुकरातको आयतन दार्शनिकमा अनुवाद भयो । त्यसैले चिराइतोमा पनि गुलियो भेटे ।
मुलुकको मुखिया केपी ओली यतिबेला अस्पतालमा हुनुहुन्छ । बाहिर जताततै सित्तै पाउने अक्सिजनको मूल्य अस्पतालको बेडमा कति महँगो हुने रहेछ, उहाँले नजिकबाट अनुभव गरेको हुनुपर्छ । मुलुक व्यवस्थापन गर्ने एउटा रानो मौरी विरामी हुँदा यति धेरै घाटा मुलुकलाई हुन्छ भने ज्यामी मौरीहरुको स्वास्थ्य बिग्रँदाको हालत के हुन्छ ? हामीले अस्पताल बनाउन प्रतिस्पर्धा ग¥यौं तर जनता रोगी नै हुन नदिने उपायका विषयमा कहिल्यै बहस नै गरेनौं । मान्छेको यही कायाभित्र स्वर्ग, नर्क, सुखशान्ति, ऐश्वर्य, प्रेम लुकेको हुन्छ ।
जीवनको पहिलो सत्य आफ्नो जन्म तिथि मिति हो । तर त्यो पनि अरुबाट थाहा पाउनु पर्छ । अनि आफूलाई बादशाह सम्झिनुको अर्थ के नै रहन्छ र ?
प्रधानमन्त्रीका लागि यतिबेला सर्वाधिक ठूलो शत्रु प्रतिपक्षी नभएर आफ्नै शरीरभित्रको रोग हो । नढाँटीभन्दा औषधीले गर्ने साइड ईफेक्टभन्दा औषधि निल्ने पानीले बिसाउला भनेर त्राही त्राही हुनुपर्ने अवस्था मुलुकबासीको छ । अधिकांश रोगको जड पानी हो भन्ने डाक्टरको मत छ । तर राजनीतिक डाक्टरहरुको राजनीति त्यही पानीमा टिकेको छ । प्यास मेटने पानी नभए पनि ओखती निल्ने पानी जनतालाई ख्वाउने प्रण त्यही बेडबाट गर्नुस् ।
दर्जनौं ओखतीमा राज्यलाई भार पर्ने गरी अनुदान किन दिने ? बरु कुखुराको मासुलाई यति सस्तो बनाउँ कि खाजामा समेत नेपालीले मासुभात खाउन । एक दशकपछि रोगी नपाएर देशभरका अस्पताल संकटमा परे भन्ने समाचार आओस् । मासुभात खाएर उत्पादित ‘भुसतिघ्रे’ जनशक्तिलाई काम दिएर हेर्नुस अनि देख्नुहुन्छ परिणाम । बाटो खनिदिनुस् न गर्ने त सन्ततिले हो ।
यतिका वर्ष अरुले हुर्काएको बुढो भोगटेको रुखमा मलजल गरेर स्याउ फलाउने फन्टुस काम सच्याउनुस् प्रधानमन्त्रीज्यू । तपाईंले नगरे कसले गर्छ ? अहिले नगरे कहिले गर्ने ? छातीमा हात राखेर भन्नुस् त– ‘मन्त्रीहरु असफल तपाईं सफल कुन शास्त्रको मानक हो ? क्याप्टेन सफल खेलाडी असफल कुन खेलमा हुन्छ ?’ ०७ सालमा आएको प्रजातन्त्र एक वर्षपछि जुम्लीले थाहा पाएको समय होइन यो ।
राम्रो कामको बासना अनन्त फैलिन्छ । अलेक्जेण्डर ग्रामवेलकी पत्नी कान सुन्न असमर्थ थिइन । उनको नाम थियो– ‘हेल्लो’ । घरव्यवहार नै चल्न समस्या भएपछि ग्रामवेलले पत्नीका लागि एउटा यन्त्र बनाउने विचार गरे । रातदिनको मेहनतपछि यन्त्र तयार भयो । आफूले बनाएको यन्त्र नजिक गएर बस्न पत्नीलाई भने । यताबाट उनी ‘हेल्लो’ भनेर चिच्याउँछन् तर पत्नीले सुने पो ।
ग्रामवेलले पत्नीसंग संवाद गर्न बनाएको यन्त्रले टेलिफोनको रुप धारण ग¥यो । आज संसारमा सबैभन्दा बढी संसारमा बोलिने शब्द ‘हेल्लो’ भएको छ । पत्याउनुहुन्छ– भगवानको नामभन्दा बढी ‘हेल्लो’ उच्चारण हुन्छ । कति भाग्यमानी पत्नी थिइन हेल्लो । मरेर गएको वर्षौं भइसक्दा पनि संसार उनको नामका पछाडि दौडिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू , खानेपानी, यातायात, वातावरणजस्ता मन्त्रालय आफ्नो हातमा लिएर सरसफाई, पूर्वाधार र पानीको छेलोखेलो गरिदिनुस् । शितल जल र स्वस्थ हावाले जनताको प्राणवायु फ्रेस गरिदिनोस् । हामी पनि ग्रामवेलभन्दा कम छैनौ– हरेक बाटोको नाम केपी मार्ग र धाराको नाम ‘राधिका जल’ सहर्ष स्वीकार्छौं ।
अर्थशास्त्रको सर्वाधिक ठूलो मुख्यालय चुलो हो । ताउलोमा आगो सहजसंंग लाग्यो भने बाँकी सबै गुनासा आफैं सेलाउँदै जान्छन् । घर ठूलो भएर भन्दा पनि परिवारका सदस्यमा हाँसोको मात्राले सन्तुष्टि उजागर हुन्छ । गल्ती हुनु प्रकृति, स्वीकार्नु संस्कृति र सुधार्नु प्रगति हो । जीत हार सोचमा भर पर्छ । मान्यांै भने हार, ठान्यौ भने जित । चुनाव जितेर केही हुन्न, मन जित्नु प¥यो । चुनाव त प्राविधिक खेल न हो ।
चुनावमा उठेका योजनाविद् डा. हर्क गुरुङलाई नेपाली जनताले जिन्दगीभर केही सय मतमा सीमित राखे । तर देशको राष्ट्रिय योजना आयोग उनैले खनेको जगमा अडेको छ । जतिसुकै विद्यावारिधि फेरिए पनि हर्क गुरुङको त्यो साखलाई कसैले विस्थापित गर्न सक्दैन । नेपाल बुझेका तीन व्यक्ति थिए– टोनी हागन, हर्क गुरुङ र डोरबहादुर विष्ट । यी तीनै जना यो धरामा छैनन् । तर अहिलेका सबै नेताले हेलिकोप्टरमा मारेको भन्दा धेरै दूरी यी त्रय महामानवको पाइतालाले नापेका थिए । नङ्ग्राले देशको शरीर छामेका थिए । हिमाल, पहाड र तराईको सामथ्र्य बुझेका थिए ।
जीवनको रहस्य के हो ? यस्ता प्रश्नहरुको चाङ बोकेर मानिस सृष्टिदेखि अहिलेसम्म अविराम यात्रा गरिरहेको छ । तर हजारौं, लाखौं भूmठहरुको पहरा, पर्खाल नाघेर पनि उसले चित्तबुझ्दो सत्यमा सीमित हुन सकेको छैन् । स्वच्छ, सीधा र साँचो कसले बोल्ने ? आत्मैदेखि बोल्ने अभ्यासमा हामी कति पारंगत छौं ?
आफ्नै हात छातीमा राखेर धर्म भाक्नुस् त– सत्विवेकको नाममा, नीति धर्मको नाममा, जीवन जीविकाको बाध्यतामा अनि राजनीतिको खालमा अन्तरआत्माको आवाजलाई कति धोका दिनुभयो ? समयले काँडा उमार्दैन । समयलाई दोष दिएर उम्किने प्रयास अब काम लाग्दैन । यदि यो फाल उम्कियो भने शास्त्रले भनेको यही सत्य हाम्रा लागि सत्बचन हुनेछ । हाम्रो बिन्ती छ– शास्त्रको यो भविष्यवाणी मिथ्या सावित होस् ।
दाता दरिद्रो कृपणो धनाढ्य ः पापी चिरायु सुकृति र्गतायु ः